रोआल्ड डहलका पुस्तकहरू, मानवताका लागि एक विशाल साहित्यिक विरासत | वर्तमान साहित्य
Roald Dahl पुस्तकहरु
जुआन अर्टिज | | जीवनी, लेखकहरू, किताबहरु, धेरै
Roald Dahl पुस्तकहरू।
रोआल्ड डाह एक प्रख्यात वेल्श उपन्यासकार, कवि, लघुकथा लेखक, र नर्वेली मूलका पटकथा लेखक थिए।। उनले धेरै लोकप्रिय कार्यहरू जस्तै विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त गरे जेम्स र विशाल पीच (1961), चार्ली र चकलेट कारखाना (1964), अप्रत्याशित कथा (1979), डायनहरू (1983), माटिल्डा () १) वा Agu ट्रोट (१ 1990 13 ०) Llandalf (कार्डिफ) मा जन्म, सेप्टेम्बर १,, १ 1916 १। मा, उहाँ महाकाव्य क्षणहरूले भरिएको जीवन थियो जुन प्रेरणाको रूपमा थियो। यसको प्रभाव यस्तो छ कि एम्मा वाटसनले पनि यसलाई पढ्ने सल्लाह दिन्छ।
तर सबै कुरा सजिलो थिएन, प्रियजनहरूको मृत्यु पनि उनको लागि पुनरावर्ती घटना थियो। उहाँ आफ्नो अन्तिम दिनहरु सम्म विभिन्न विवादहरु मा संलग्न थिए, विशेष गरी आफ्नो इजरायल विरोधी कथन को कारण, वा आफ्नो साहित्यिक रचनाहरु को केही फिल्म अनुकूलनको समयमा उत्पन्न समस्याहरु को कारण। जे होस्, उहाँ आफ्नो भारी बौद्धिक विरासत, र आफ्नो परोपकारीताको लागि सम्झिन्छ। उनीहरूको योगदान बीच खडा उनले आविष्कार गरेका शब्दहरू अक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोशमा समावेश थिए.
1 Roald Dahl को जीवन
1.3 प्रसिद्ध चार्ली र "केटा" को जन्म
1.4 उच्च शिक्षा
1.5 WWII मा उसको नामांकन
1.6 घातक दुर्घटनाको नजीक
1.7 चमत्कारी रिकभरी
1.8 पहिलो प्रकाशन, विवाह र बच्चाहरू
1.9 दोस्रो विवाह र मृत्यु
2 सर्वश्रेष्ठ ज्ञात पुस्तकहरू रोआल्ड डाहल
2.1 चार्ली र चकलेट कारखाना
2.2 अप्रत्याशित कथा
3 Roald Dahl को कलात्मक र साहित्यिक विरासत
Roald Dahl को जीवन
हाराल्ड डाहल र सोफी म्याग्डाले हेसलबर्ग उनका अभिभावक थिए। जब सानो रोआल्ड years बर्षको थियो, उनकी बहिनी एस्ट्रिड एपेन्डिसाइटिसको कारण मरे। केही हप्ता पछि उनका बुबा निमोनियाले मरे। परिस्थितिमा, विधवा आमाको लागि तार्किक कुरा आफ्नो जन्मभूमि नर्वे फर्कने थियो, तर उनी बेलायतमै रहे। उनले त्यसो गरिन् किनभने उनको श्रीमान्को चाहना थियो कि उनीहरुले आफ्ना बच्चाहरुलाई ब्रिटिश स्कूलमा शिक्षा दिए।
आठ Dahl को उमेर सम्म Llandalf क्याथेड्रल स्कूल मा अध्ययन, त्यसपछि उनले छ वर्षको लागि वेस्टन-सुपर-मारेको समुद्री तटमा रहेको निजी सेन्ट पीटर स्कूलमा भाग लिए। तेह्रौं जन्मदिन मा, किशोर रोआल्ड डर्बशायरको रेप्टन स्कूलमा भर्ना भए, जहाँ उनी स्कूल फाइभ टीमको कप्तान थिए र फोटोग्राफी सहायकको रूपमा काम गरे।
प्रसिद्ध चार्ली र "केटा" को जन्म
रेप्टनमा उनको बसोबास उनको प्रख्यात बाल कथाको कथानकको उत्पत्ति भयो चार्ली र चकलेट कारखाना (1964)एक स्थानीय कम्पनीले कहिलेकाँही विद्यार्थीहरूको स्वाद लिन मिठोको बाकस पठाउँथ्यो। उनी ग्रीष्म holidaysतुमा आफ्ना आफन्तहरूसँग नर्वेमा बिताउँथे जुन लेखनका लागि प्रेरणाको रूपमा काम गर्दछ। केटा: बचपनको कथा (१ 1984। XNUMX) यद्यपि यो एक आत्मकथा कार्य जस्तो लाग्न सक्छ, Dahl जहिले यसलाई अस्वीकार गर्‍यो।
उच्च माध्यामिक विद्यालय पछि, उनले न्युफाउन्डल्याण्डमा सार्वजनिक विद्यालय अन्वेषक सोसाइटीसँग अन्वेषण कोर्स गरे। पछि, १ 1934। In मा, उनले युनाइटेड किंगडममा रोयल डच शेल, एक तेल कम्पनी संग अध्ययन जारी राखे। दुई वर्ष पछि उनलाई शेल हाउसमा प्रशिक्षण पूरा गर्न डार-ए-सलाम (वर्तमान तान्जानिया) पठाइएको थियो, जहाँ उनले अत्यधिक आक्रामक सिंह र कीराहरूको खतरामा ईन्धन आपूर्ति गर्थे।
WWII मा उसको नामांकन
सन्‌ १ 1939 XNUMX in मा दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुँदा रोआल्ड डहल शाही वायुसेनामा भर्ना हुन नैरोबी सरे।। करीव आठ कुल घण्टाको प्रशिक्षण पूरा गरिसकेपछि, उनी एक्लै उड्न थाले र केन्याको वन्यजन्तुमा आश्चर्यचकित हुन थाले (उनले ती अनुभवहरूमध्ये केहीलाई पछि आफ्ना पुस्तकहरूको लागि प्रयोग गरे)। सन् १ 1940 .० मा उनले इराकमा आफ्नो उन्नत प्रशिक्षणलाई निरन्तरता दिए, अधिकारी बनाइए र to० लाई आदेश दिएvo आरएएफ टीम।
घातक दुर्घटनाको नजीक
यसको पहिलो मिसनहरू मुख्यतया एक ग्लोस्टर ग्लेडिटरमा सवार ईन्धनको ढुवानीमा समावेश थियो। ती मध्ये एकमा, सेप्टेम्बर १,, १ 19 1940० मा, यो निर्धारित स्थानमा एक त्रुटिको कारण लिबियामा सबैभन्दा घातक दुर्घटनाग्रस्त अवतरणको शिकार भयो। (ब्रिटिश र इटालियन रेखा बीच)। यो एक पछि आरएएफ अनुसन्धान मा निर्धारित थियो। रोआल्ड डहल कवच एक भाँचिएको खोपडी, एक टुक्रिएको नाक र अन्धो संग बल्दो विमान भाग्यो।
चार्ली र चकलेट कारखाना।
डाक्टरहरूले आफू फेरि कहिल्यै उड्ने छैन भनेर भविष्यवाणी गरे पनि, जवान रोआल्डले आठ हप्ता पछि आफ्नो दृष्टि फेरि प्राप्त गरे। दुर्घटनाको र फेब्रुअरी १ ​​1941 80१ मा डिस्चार्ज गरियो, उडान ड्युटीमा फर्किएपछि। त्यतिबेलासम्म the० औं टोली पहिले नै एथेन्सको नजिकै थियो अक्सिस सेनाको बिरूद्ध धेरै प्रतिकूल परिस्थितिमा लड्दै। अझै दुई महिना पछि, Dahl भूमध्यसागर पार गर्न तिनीहरूलाई सामेल।
दृष्टिकोण पूर्णतः अन्धकार थियो: १ Hel वटा तूफान र British ब्रिटिश ब्रिस्टल ब्लानहेम्सले हेलेनिक इलाकामा एक हजार भन्दा बढी शत्रु जहाजहरूको बिरूद्ध। आफ्नो पहिलो लडाई बम जहाज जहाज चालिसमा हुँदा, डाहले छ वटा बमवर्षकको सामना गर्यो, एउटालाई गोली हान्न सक्षम भयो पछि पक्राउ पर्न ती सबै युद्धक अनुभवहरू उनको आत्मकथाको पुस्तकमा कैद भएका थिए एक्लै उडान गर्दै.
पहिलो प्रकाशन, विवाह र बच्चाहरू
En १ 1942 .२ उनी वाशिंगटनमा डेपुटी एयर संलग्नका रूपमा नियुक्त भए। त्यो शहरमा उनले आफ्नो पहिलो प्रकाशन बनाउँथे, शुरूमा भनिन्थ्यो केकको एक टुक्रा (अती सजिलो)। त्यहाँ उनले ग्लोस्टर ग्लेडिटरमा सवार आफ्नो दुर्घटनाका विवरणहरू सुनाए, तर अन्तमा यो शीर्षक अन्तर्गत जारी गरियो। लिबिया मा शट डाउन। १ 1943 XNUMX मा उनको पहिलो बच्चाहरूको गद्य देखा पर्‍यो, Gremlins, धेरै दशक पछि सिनेमा अनुकूलित।
अमेरिकी अभिनेत्री पैट्रसिया नील १ 1953 1983 देखि १ XNUMX .XNUMX सम्म उनकी श्रीमती थिइन्, उनीसँग उनका पाँच जना बच्चा थिए, ती मध्ये, लेखक टेसा Dahl। दुःखको कुरा, १ 1962 .२ मा उनकी सात वर्षीया छोरी ओलिभिया दादुरा भाइरसले गम्भिर एन्सेफलाइटिसबाट बित्नुभयो। थेओ, उनका एक मात्र छोरा, बाल्यकालमा दुर्घटनाका कारण हाइड्रोसेफेलसबाट ग्रस्त थिए। यस घटनाको नतिजाको रूपमा, उनी अनुसन्धानमा संलग्न भए जुन वेड-डहल-टिल भल्भको आविष्कारमा नेतृत्व गर्‍यो, हाइड्रोसेफ्लस कम गर्न डिजाइन गरिएको उपकरण। उनकी अर्की छोरी ओफेलिया पनि स्वास्थ्य संस्थाको पार्थनर्सका सह-संस्थापक र निर्देशक थिइन्। एक नाफा नकमाउने संस्थाले संसारको सबैभन्दा गरिब क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दछ।
Roald Dahl उद्धरण।
दोस्रो विवाह र मृत्यु
उनको नातिनी, मोडेल र लेखक सोफी डाहल (टेसाकी छोरी), एउटा मुख्य पात्रको प्रेरणा एक राम्रो स्वभाव विशाल (1982)। उहाँ १ 1983 .XNUMX मा दोस्रो पटक विवाह गर्नुभयो, फेलीसिटी एन डी एब्रू क्रॉसल्याण्डको साथ, आफ्नो पहिलो पत्नीको सबै भन्दा राम्रो मित्र। M२ November नोभेम्बर, १ 23 1990 ० लाई आग्रह गरियोल्युकेमियाको कारण बकिंघमशायरमा उसको घर।
प्राप्त पोष्टमार्टम सम्मानहरूमध्ये बक्स काउन्टी संग्रहालयमा रोआल्ड डल चिल्ड्रेन ग्यालरीको उद्घाटन हो। र रोआल्ड दाहल संग्रहालय - ऐतिहासिक केन्द्र २०० Great मा ग्रेट मिसेंडेनमा खोलियो। यसै गरी, फाउण्डेशन जुन उनको नाम हो वेल्श लेखकको प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिँदै छ न्युरोलोजी, हेमेटोलजी र कमजोर क्षेत्रहरूमा जनसंख्याको साक्षरता जस्ता क्षेत्रमा।
सर्वश्रेष्ठ ज्ञात पुस्तकहरू रोआल्ड डाहल
चार्ली र चकलेट कारखाना
रोआल्ड दाहलको तेस्रो बच्चाहरूको पुस्तकको सुरुवात - पछि Gremlins y जेम्स र विशाल पीच- यसको मतलब उसको साहित्यिक जीवनमा एउटा महत्त्वपूर्ण मोड थियो। त्यसकारण, यो आश्चर्यजनक कुरा होइन कि यो काम सफलतापूर्वक दुई पटक (१ 1971 and१ र २०० successfully) ठूलो पर्दाको लागि अनुकूलित गरिएको छ। कथा १ 2005 .1964 मा प्रकाशित भयो चार्ली बकेटमा केन्द्रित छ, धेरै गरिब परिवारका केटा जो आफ्ना आमाबुबा र हजुरबा हजुरआमासँग भोका र चिसो भएर बस्दछन्।
नायकको भाग्य परिवर्तन हुन्छ जब ऊ पाँचवटा सुनौलो टिकट मध्ये एक जित्छ कि सहरको चकलेट कारखानामा यात्रा प्रदान गर्दछ।। ठाउँ प्रायः जासुसीबाट बच्न बन्द गरिएको छ र विलक्षण करोडपति विली वोंकाको स्वामित्वमा रहेको छ। यस विलक्षणले पाँच सहभागीमा एक उत्तराधिकारी छान्नको लागि यो सबै आयोजित गर्नुभयो। नाटकीय घटनाहरूको शृंखला पछि, चार्लीलाई विजेताको नाम दिइयो र उनी आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको साथ कारखानामा सर्छन्।
यो १ 16 छोटो कथा का मास्टरफुल संग्रह हो जुन १ 1979। In मा प्रकाशमा आयो। पहिले, कथाहरू बिभिन्न प्रिन्ट मिडियामा प्रकाशित भएको थियो। कालो हास्य, सस्पेंस र षड्यन्त्र ती सबैमा साझा तत्वहरू छन्। अरूहरू विशेष गरी बदलाको बारेमा छन् (लेडी टर्टन, नन्क डिमिटिस) वा असंतोष (भुनी भेडा, स्वर्ग सम्मिलित)। र, उनीहरूका बच्चाहरूको कथाहरू जस्तै, तिनीहरू प्रायः नैतिक कथाहरूसँग अन्त हुन्छन्।
यो १ 1983 1990 मा प्रकाशित भएको थियो। निकोलस रोग निर्देशित यसको फिल्म अनुकूलन (१ XNUMX XNUMX ०) ले विवादास्पद कारणहरू ल्यायो किनभने उनीहरूले उपन्यास फिट गरेनन् र उनीहरूले डाहललाई धेरै नाराज गरे। यो पहिलो व्यक्तिमा कसैलाई बोलेको कथा हो जसको "जो कथाहरूमा मनपर्दैन" भन्ने जोडीसँग भेट भयो।। पहिलो उसलाई सर्प दिन चाहान्थ्यो; दोस्रो संग यो अझ नराम्रो थियो।
समानान्तर रूपमा, र्यापोर्टरले उनको आमाबुबाले भोगेको घातक कार दुर्घटनाको बारेमा बताउँदछन्, जसका लागि उनलाई नर्वेमा उनको हजुरआमाले हुर्काए। नानीले उनलाई बोक्सीको विशिष्ट विशेषताहरू के हो र उनलाई ती children जना बच्चाहरूको पछिल्ला आक्रमणहरूको बारेमा सचेत गराउँछिन् जुन उनलाई थाहा थियो। तर जादुगर पहिचान गर्न जटिल छ, तिनीहरू आफ्नो गोप्य मिशन पूरा गर्दा सामान्य महिलाको रूपमा पहिरन गर्दछन्: विश्वका बच्चाहरूलाई नष्ट गर्न।
१ 1988 XNUMX मा Dahl द्वारा प्रकाशित यो काम हजारौंलाई सबैभन्दा परिचित हुनुपर्दछ, यो ड्यानी डेभिटो निर्देशित लोकप्रिय समरूप फिचर फिल्म (१ 1996 XNUMX)) को कारणले गर्दा हो। मुख्य पात्र माटिल्दा वर्मवुड हो, एक अति बुद्धिमान पाँच-वर्षीया केटी, उत्सुक पाठक र धेरै संसाधन। उनी आफ्ना बाबुआमाकी छोरी हुन् जसले आफ्ना सद्गुणहरूको बारेमा धेरै अल्छी र अज्ञानी छन्।
उसको शिक्षक मिस हनीले उनका असाधारण गुणहरू हेरेर प्रिन्सिपल ट्रंचबुललाई माटिल्डा अझ उन्नत कक्षामा उपस्थित हुन आग्रह गर्छिन्। प्रिन्सिपलले अस्वीकार गर्‍यो, किनकि उनी वास्तवमा खराब व्यक्ति हुन् जसले बच्चाहरूलाई कुनै कारण बिना सजाय भोग्न रमाउँछिन्। यसैबीच, माटिल्डाले टेलिकिनेसिस शक्तिहरूको विकास गर्दछ, आफ्नो आँखाका साथ वस्तुहरू सार्न सक्षम हुँदै।
मिस हनी केटीको क्षमताको बारेमा उत्सुक छिन र उनको घरमा आमन्त्रित गर्छिन्। त्यहाँ माटिल्डा भन्छिन् कि उनकी शिक्षिका एकदम गरिब छिन् र उनको बुआको हेरचाहमा पीडित छिन्, जो (पछि खुलासा गरिएको) श्रीमती ट्रंचबुल हुन्। त्यसैले माटिल्डाले श्रीमती ट्रन्चबुललाई राम्रोको लागि आफ्नो जीवनबाट बाहिर निकाल्ने योजना बनाउँछिन्। जब उनी सफल हुन्छन्, माटिल्दालाई अन्य बच्चाहरूले खुशी पार्छन् र अधिक उन्नत वर्गमा सर्छन्।
नतिजाको रूपमा, सानो उडन्ताले उनको टेलिकिनेसिस शक्ति गुमायो किनभने उसले आफ्नो नयाँ विषयहरूमा सफल हुन सबै दिमागको उपयोग गर्नुपर्दछ। अन्त्यमा, माटिल्दा एक श्रीमती हनीको अभिभावकको अधीनमा बस्दछन्। (जसले अब सुश्री ट्रन्चबुलसँग सम्झौता गर्नुपर्दैन) केटीका बाबुआमालाई कार चोरेको कारण पक्राउ गरे पछि।
Roald Dahl को कलात्मक र साहित्यिक विरासत
कुलमा, रोआल्ड डाहल १ children's बाल कथाहरू, बच्चाहरूको लागि pro गद्य पुस्तकहरू, वयस्कहरूको लागि २ उपन्यास, कथाका ant वटा कविताहरू,bग्रंथसम्बन्धी संस्मरणहरू र एउटा नाटक प्रकाशित। अडियोभिजुअल विश्वको सन्दर्भमा, डहलले १० वटा फिल्म लिपिहरू बनाई, प्रसिद्ध किश्तहरू सहित हामी दुई पटक मात्र बाँच्दछौं (१ 1967 XNUMX), Chitty Chitty बैंग बैंग (1968) र एक कल्पना संसार (१ 1971 ११), अरूमा।
उनले एक संयुक्त निर्माता र संयुक्त राज्य अमेरिकामा television टेलिभिजन कार्यक्रमहरूमा निर्माता र / वा होस्टको रूपमा पनि भाग लिएका थिए।। उनका कामहरू १ feature फीचर फिल्महरूमा रूपान्तरित गरिएको छ जुन सार्वजनिक रूपमा धेरै प्राप्त भयो जेम्स र विशाल पीच (1996), शानदार श्री फक्स (2009) र BFG (२०१ 2016 - मूल अंग्रेजी शीर्षक एक राम्रो स्वभाव विशाल)। थप रूपमा, उनका सिर्जनाहरू9श्रृंखला र टेलिभिजन शर्टहरूमा सारिएको छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » धेरै » Roald Dahl पुस्तकहरु
जब तपाईं पुस्तक दिनुहुन्छ तपाईं केवल पुस्तक दिनुहुन्न
२०२०। नयाँ वर्षको जनवरीको लागि केहि सम्पादकीय समाचारहरू